Dimy mianadahy voasambotra, iray maty voatifitra : ravan’ny polisy ny “bande des 7” | NewsMada
Dimy mianadahy voasambotra, iray maty voatifitra : ravan’ny polisy ny “bande des 7”
Ankoatra ireo fitaovam-piadiana mahery vaika (basy sy bala marobe, dimy mianadahy no voasambotra, azo sambo-belona. Maty voatifitra kosa ny iray hafa. Tambajotran-jiolahy malaza amin’ny fanafihana mitam-basy, antsoina hoe “bande des sept” ity ravan’ny polisy ity.
Ravan’ny polisy ireo andian-jiolahy antsoina hoe “bande des sept”, raha ny fanazavan’ny Commissaire Central, Tsaramonina Ravony Jean Victor, tamin’ny mpanao gazety, omaly.
Ny sabotsy, 8 janoary teo no nisy ny fifampitifirana teo amin’ny jiolahy sy ny polisy ka lavon’ny bala ny iray tamin’ireo olon-dratsy, teny Androndra.
Tratra sambo-belona kosa ny dimy ka vehivavy ny iray amin’ireo. Tratra teny amin’ireto olon-dratsy ireto ny basy poleta efatra sy antsy roa ary fitaovana famakiana trano iray. Ny fananan’ireto fitaovam-piadiana mahery vaika no nahasahiany nanohitra ny polisy teny Androndra. Fihantsiana mihitsy ny nataon’ireo jiolahy, saingy tsy naharesy tosika ny mpitandro filaminana.
Ankoatra ilay vehivavy, izay mahavariana ihany ny mahatafiditra azy anaty tambajotran-jiolahy, ny iray tamin’ireo voasambo-belona vao nahavita sazy 10 taona. Ny roa kosa mbola misy folo taona an-tranomaizina. Izany hoe, olona mbola tokony hisazy ireto farany ireto izany. Tsy zava-baovao amin’ny andian-jiolahy eto an-tanàna izany. Fomba efa fanaon’ireo jiolahy mihitsy ny sady mbola mamita sazy no manao asan-jiolahy. Ny tsy voavalin’ny tompon’andraikitra na tsy tiany valiana mivantana ny amin’ny ahafahan’ny jiolahy manao izany. Misy firaisana tsikombakomba amin’ny manampahefana, sns.
Tsy hitsitsy ny polisy
Araka ny voalazan’ny Commissaire Central ihany, tsy hitsitsy mihitsy ny polisy ho an’ireo mpandika lalàna sy ireo mpanao asa ratsy rehetra ireo ka hampiasa ny fahaizany sy ny tanjany ary ny fitaovana ao aminy. Ny taona 2016 hatramin’izao, miisa 20 ireo basy tratra ary 200 mahery ny bala. Kalachnikov maromaro niaraka tamin’ny bala nifanaraka tamin’izany indray sarona.
Nambarany ihany tamin’ny jery todika nataony, fa maro ireo andian-jiolahy rava tamin’iny taona 2016 lasa teo. Nahatratra 730 ny vaky trano sy herisetra. Nahatratra 401 ny fanafihana mitam-piadiana. Tamin’ireo raharaha ireo, lehilahy miisa 1491 no naiditra am-ponja ary 253 no nahazo fahafahana vonjimaika. Nahatratra 1000 isa ny vehivavy ary nisy ny nahazo fahafahana vonjimaika ary nisy ny naiditra am-ponja.
Amin’ity taona ity izany, mety hihena ny asan-jiolahy eto an-dRenivohitra raha ny tian’ny mpitarika ny polisy eto an-tanana no lazaina. Raha tsisy koa anefa ny delestazy, mety hihena bebe kokoa ny asan-jiolahy.